ALAKAMISY 14 AVRILY - ALAROBIA 20 AVRILY 2022
MPIKAMBANA AO AMIN’NY ANTOKO AVI : Afaka manohana izay kandidà tiany ny tsirairay
Nivoaka ny fanapahan-kevitra. « Afaka manohana kandidà ho Filohampirenena izay tiany ny mpikambana tsirairay, hanolotra kandidà amin’ireo karazam-pifidianana rehetra ankoatra ny an’ny Filoham-pirenena ny antoko Avi » 19 avril 2013
Ireo no fanapahan-kevitry ny antoko Asa vita no ifampitsarana nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireo teny Andoharanofotsy, omaly.
Raha ny fanangonam-baovao natao manodidina an’ity fivoriamben’ny antoko Avi ity, dia karazana kaongresy kely mihitsy izany satria ankoatra ireo mpikambana eo anivon’ny birao politika dia tonga niatrika izany koa ireo mpandrindram-paritra rehetra. Teo ihany koa Ratsirahonana Lala Norbert, filoha mpanorina sady filoha nasionalin’ity antoko ity.
« Aoka tsy hiady »
Voalaza anefa, fa « nanafatrafatra ny filoha nasionaly dia mba tsy hisian’ny ady eo amin’ny samy mpikambana na dia samy manana kandidà ho Filoham-pirenena tohanany aza ny tsirairay ».
Ny ankamaroan’ireo birao politika sy mpikambana sasantsasany aloha hatreto dia tazana hatrany miaraka amin’ny kandidà Andrianainarivelo Hajo, isan’ireny Ramaroson Laurent, Rabenirina Jean Jacques sy Ratsirahonana Lala (zanaky ny filoha mpanorina). Rajobson Johary (sekretera jeneralin’ny antoko) sy Andriamahazo Nirhy Lanto kosa dia tsy tena mbola sahy miseho mivantana manohana kandidà atsy na aroa aloha hatreto, fa raha ny tombantomban’ny maro dia miaraka amin’ny antoko Tgv izy ireo. Ny sasany dia miaraka amin’ny kandidàn’ny antoko Pnj Mazava. Ramatoa Ndahimananjara Johanita, minisitry ny Fahasalamam-bahoaka koa dia tsy mbola nilaza na iza no kandidà hotohanany. Mety noho izy mbola minisitra amperinasa no tsy hilazany izany.
ALAKAMISY 14 AVRILY - ALAROBIA 20 AVRILY 2022 (0) 19 avril 2022 Hita porofo fa misy ny Governora mitavozavoza FITANTANANA NY FARITRA (0) 19 avril 2022 Tetidratsy avo lenta no nampisaringotra ireo ankizivavy dimy sy ilay vahiny TOAMASINA (0) 19 avril 2022 Mpitondra fivavahana manoso- potaka olom-boafidy sy olom-boatendry MENABE (0) 19 avril 2022 « Mbola misy mpanao politika manao lava tanana miaro ireo dahalo » HALATR’OMBY ANY ATSIMO (0) 19 avril 2022